DAAWO: Degmooyinka Banaadir oo laga bilaabay dhismayaal nooc cusub ah oo lagu qurxinayo + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka DAAWO: Degmooyinka Banaadir oo laga bilaabay dhismayaal nooc cusub ah oo lagu...
DAAWO: Degmooyinka Banaadir oo laga bilaabay dhismayaal nooc cusub ah oo lagu qurxinayo + Sawirro
(Muqdisho) 31 Maarso 2019 – Guddoonka Gobolka Banaadir, Md Cabdiraxman Cumar Cusmaan (Yariisoow) ayaa maanta xarigga ka jaray mashruuca waddooyinka xaafadaha Muqdisho qaarkood lagu dhigayo dhagaxa interloc-ga loo yaqaanno.
Mashruucan oo marka hore lagu bilaabayo 7 degmo iyo 19 xaafadood oo kala tirsan degmooyinkaasi, ayaa maanta ka bilowday Degmada Xamar-Jajab, gaar ahaan waaxda Gaheyr.
Yoolka mashruucan qurxinta ah ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado bilicsamida caasimadda, sida uu sheegay guddoonku.
Dadweynaha Caasimadda Muqdisho ayaa lagu boorriyay in ay gacan wayn ka gaystaan dib u dhiska dalkooda, taasoo qayb ka ah soo kabashada Muqdisho oo ah magaalo muddo dheer kusoo jirtey nidaam darro iyo dagaallo hubaysan oo aan mira dhalin.
Previous articleGODOB CAASHAQ: Sarkaal Booliis ah oo toogasho ku diley nin ay ka raacday gabar uu jeclaa!!
Next articleDAAWO: Madaxda Carbeed oo baaqyo maran iskaga marqaati kacay!